ODF ilaalchise yaadni dhuunfaa ani qabu maal fakkaata? – Welcome to bilisummaa
ODF ilaalchisee yaada tiibbana daddarbamaa jiruu irratti ilaalcha dhuunfaa akka nam tokkootti qabu biifa barreeffamaan ibsachuun rakkiisaa waan ta’eef video gabaabduu kana waraabuuf diirqameen jiira. Video kana keessatti waan sadii irratti ilaalcha koo ibsachuu yaaleera:
1) Walaloo ani tiibbana barreesse irratti yaadni/qeeqni namootaa maal fakkaata? Ijjeennoon ani qabu hoo akkamiin ibsama?
2) Yaada ibsachuu irratti garaagartuummaan dhaloota abbootii keenyaaf nu qiixxalamaan jiiru akkamiin ilaalama.
3) ODF ilaalchise yaadni dhuunfaa ani qabu maal fakkaata?
Tags ADO Leencoo Lataa Musa Dawud ODF
Previous Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u
Next Maal haa baasuuf dhama raasuu?